Dayaca iyo darxumada Faroole nala damacsanaa Gaas baa damiyey! – Radio Daljir
Janaayo 12, 2018 5:15 g 5
Farriin qoraaleed nooga timid dhegayste Radio Daljir: “Intii Faroole ahaa Madaxweynaha Puntland dhibka dalka soo gaaray waa kala durugsanaa. Mudug darxumay la libiqsatay. Cayn cadow buu ka adeejiyey. Sool iyo Sanaag wuxuu ka dhigay seero laga guuray. Bari ciidan badeed booliis loogu yeeray iyo wiil buu ka adeejey. Laakiin Karkaar baa karkarisay!”
Madaxweyne Faroole waxaa bishii Janaayo 2014 xikii madaxweyne ka riday oo kaga guuleystay Datoor Cabdweli Cali Gaas. 66 cod ee Baarlamaanka Puntland uu Madxweynaha Puntland ku dooranayey Datoor Gaas waxa uu helay 33 cod meesha Faroole ka helay 32 cod. Waxaa khasaaray 1 cod, waxa uuna ahaa cod Faroole uu tirsanayey. Halkaas waxaa 8 Janaayo Madaxweynaha Dowladda Puntland ku noqday Datoor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Waxaa xusid mudan, waxaana garan kara qofkii waqtigaas Puntland joogey, in Faroole uu isa siiyey guusha Madaxweynenimo ee Puntland oo uusan marnaba is oran waxaa kaa badin doonaa Cabdiweli Cali Gaas ama Cali Xaaji Warsame. Laakiin waa laga badiyey. Ha laga badiyo ma xuma e waxaa looga badiyey 1 cod. Waxaa kale oo xusid mudan in Cali Xaaji oo helay 16 cod uu codadkiisii ku wareejiyey Gaas, uuna ahaa boqraha Gaas.
Sida ay Radio Daljir la qaybsadeen siyaasiyiin goobjoog ahaa maalinkii doorashada, rididii Faroole kabacdi, kaddib markii uu ogolaaday in laga badiyey, Faroole waxa uu u tagey Cali Xaaji Warsame oo uu ku yiri, “Cali maanta waad iga hiillisay!” Cali Xaaji oo Faroole u jawaabaya waxa uu yiri, “Madaxweyne, Gaas ii hiilli buu i yiri, ee adigu miyaad hiil i weydiisatey?” Faroole waxa uu ku jawaabay, “alleylehe Caliyoow maya, oo halkaas qalad weyn baan ku galay.”
Laakiin mid buu nin walba ogaa, Faroole asna ku miyir qabey, taas oo aheyd in musharrixiinta gobolka Mudug uusan midkoodna hal cod siin doonin Faroole, illeen sida dhegaystaha kore soo qoray, intii Faroole Madaxweynaha dalka ahaa “Mudug darxumay la libiqsatay.” Waxa ay aheyd darxumo kutalogal ah, shalay aan dahsooneyn, maanta fadhi-ku-dirirka looga sheekaysto.
Siyaasaddu waa cajiib e, markii Madaxweyne Gaas uu talada dalka si fiican ula wareegay, oo uu kalsooni ku xarragoodey, geedkii siyaasadda ee Buurta Garoowe waxa uu ridey dhammaan caleemihii isbaheysiga gobolada Mudug iyo Karkaar, waxa uuna caleemosaarey kuwii Nugaaleed. Nugaal oo dhan ma wada aha e waxaa siyaasadda Buurta, mid dhaqaale iyo mid Federaal, si fiican uga dhexmuuqdey Faroole iyo xulufadiisa. Gaas waxa uu Faroole u boqray Aqalka Sare, Faroole waa loo doortey, waxa uuna u xuubsiibtey Odey Faroole.
Faroole iyo Gaas waxa ay noqdeen laba nin oo saaxiib ku ah siyaasadda Puntland iyo tan Federaalka, siiba tan Nugaaleed, lana dhihi karo si fiican bay isula jaanqaadeen. Inta ay si fiican isula jaanqaadeen buu xataa Faroole asbuuc kahor waxa uu kor u tuurey, oo sida ay dabeyshu u qaaddo tijaabiyey waqti-kordhin Madaxweyne Gaas iyo dib-u-dhigis doorashada sannadka soo socda. Waxa kale oo Faroole uu Garoowe asbuucyo kahor ka hadal-hayey shir ka dhici doona tuulada Kalabeyr iyo martiqaad Madaxweyne Gaas.
Cali Xaaji iyo raggiisii ayagu waxa ay noqdeen, welina yihiin, caleemaha laga buufiyey geedaha Buurta Garoowe, oo dabeylaha Nugaaleed iyo kuwa Mudug ay maalinba daruufaha iyo daruuraha cusub ee siyaasadeed ay hal dhan ka tusaan waxa soo socda.
Giraanta inta xawli u wareejiso dhex fariiso furitaankii gegida caalamiga ah ee Garoowe, waa Gegidaha Diyaaradaha ee loo bixiyey Janaraal Maxamed Abshir. Madaxweyne Gaas iyo Odey Faroole subixii waa iswateen oo waxa ay ahaayeen xulufo siyaasadeed, laakiin gabbal islama gaarin.
Giraanta hadana mar kale inta xawli u wareejiso gaar shalay iyo Faroole oo waayahaan si loo hilmaansanaa oo hadley.
Shir jaraa’id buu Faroole qabtay lama dhihi karo, oo cid uu la shirey iyo wax su’aal ah oo la weydiiyey ma ay jirin. Baaq nabadeed buu direy lama dhihi karo, oo waxa uu si cad u aflagaadeeyey Madaxweyne Gaas. Hadaba Faroole muxuu shalay ku soo kordhiyey giraantad siyaasadda dalka? Faroole ma shir jaraa’id buu qabtey mise Gaas buu farriin toos ah u dirayey?
Ma daalacano mana daalacan karno quluubta dadka, laakiin siyaasaddu ma aha xisaab la isku dhufto iyo dayax-gacmeed samada sare loo diro. Badanaa siyaasaddu, siiba tan liidata ee Soomaalidu, waa mid iska yaacda oo aan meelna ku qarsoomin, kuna qarsoomi karin. Sidaas darteed waxa Faroole ka xanaajiyey, xumbada ka keenay, kuna khasbay in uu shaarkii lagu yiqiin dib-u-xirto, iska dhigo nin nabad raadinaya, Madaxweyne Gaas iyo ummadda reer Puntand oo dhanna ku aflagaadeeyo, waqti kale ku dhumin meyno oo waa mid Faroole iyo Faroole oo kaliya aan dhaafsiisneyn, fasirkeedana laga heli karo fadhi-ku-dirirada ku meegaarsaan Barxadda Garoowe.
Laakiin, tan shacabka Puntland mar hore iska damiyey, baalasha taariikhda ku hubsaday, kuna saabsan dayaca iyo darxumada uu Faroole kaga tagey Puntland, iyo tiisa gaarka ah, baa ka mudan in mar kale la xasuusiyo reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed, inta nabadda u hamuun-qabta.
Sida dhegaystaha kore nala qaybsaday, Madaxweyne Gaas waxa uu xukunka la wareegay ayada oo gobolada Puntland uu Faroole kala qoqobey. Qoqobka iyo kala qeybinta gobolada Puntland ha kala darnaadeen e waxaa ugu darnaa gobolada Cayn, Mudug iyo Sanaag. Saddexdaas gobol waxa ay kala noqdeen mid uu cadoow ka adeejiyo, mid uu argagixo ku tilmaamo ama ku soo daayo, iyo mid uuba u diido iyo tab dowlo ka hawlgasho.
Dib u xasuuso halkudhigyadii Gaas ee suurtagaliyey in uu xilka hanto, Faroole kursiga ka rido, fartana ku fiiqey kalaqoqobkii Faroole, asaga oo leh, “Puntland waxay u baahantahay caddaalad, in loo caddaalad falo waxa ay u baahantahay in wiilka Madaxweynuhu dhalay iyo wiilka Caluula, Baargaal, Qandala, Buuhoodle, Badhan iyo Gaalkacyo ku nool in ay u simanyihiin dawladnimada ayaa la rabaa. Waxaa la rabaa in loo simanyahay khayraadka dalka oo gobolada iyo degmooyinku ay si siman u wada helaan.”
Madaxweyne Gaas ma uu wada daweyn kala qoqobka Puntland, Cadaalad falkuna waa hawl joogto ah oo waliba farfiiqeeda maanta wadata, mana uu xoreyn degmooyinka maqan, weli madfaca Garoowe la dul keenayna dhulka kama siibin, laakiin Gaas waxa uu daweeyey in aan dhib danbe loo marin, lana takoorin ganacsiga xorta ah ee qofeed, ha ahaado mid rooti foorneeya, mid xalwad iibsha, iyo mid beecmushtar sare beegta ama hay’ad iyo kambani saami ku keena.
Madaxweyne Gaas waxa uu suurtagashay in hormarka gobol kasta oo Puntland uu yahay hormar Puntland oo dhan oo aan mid la liidin, mid la diidin, mid kalena la oggolaan. Gaas waxa uu damiyey colaaddii Faroole dhexdhigay gobolada Puntland.
Madaxweyne Gaas waxa uu si cad oo aan gabasho iyo gorgorton toona laheyn ula dagaalmey argagixisa Puntland. Waxa uu difaacey kuwii Puntland soo weerarey. Madaxweyne Gaas waxa uu farta ku fiiqay in siyaasadda Somaliland qayb kamid ahi ay tahay taageeridda aragagixisada Soomaaliya, waxaana jeelasha Puntlad qaar laga siidaayey, qaarna weli dhoobanyihiin wiilal Somaliland ka soojeeda oo intaas wada qirey.
Intaas oo wada marag-ma-doonto ah, hadana Madaxweyne Gaas waxa uu maalin kahor la hadley shacabka Puntland asaga oo yiri Puntland waa la difaacayaa, madaafiicda Garoowe la dul-keenayna ma sii oolli doonaan, meesha Faroole barbar ka doortey.
Dhanka dastuurka, Madaxweyne Gaas iyo Baarlamaanka Puntland waxa ay ku dhaarteen in ay difaacayaan dastuurka Puntland. Madaxweyne Gaas iyo Baarlamaanka Puntland waxa ay Faroole u doorteen Xildhibaan Aqalka Sare, asaga oo mar kale ku dhaartay in uu difaacayo dastuurka Puntland. Hadaba su’aasha maanta taagan waxa ay tahay, Faroole haddii uu maalin cad jabiyey dastuurkii Puntland, kuna baaqay in aan Puntland la difaacin, uguna baaqey bulshada Nugaaleed in aysan difaaca Puntland ka qaybqaadan, maxaa la gudboon, muxuuse dastuurka Puntland ka leeyahay xilhayihii ka horyimaada dastuurka dalka?
Tan kale, horta yaa Odey Faroole kula xisaabtamaya hawshii loo igmadey ee Aqalka Sare, oo sidii Cabdi Qaybdiid uga guulaystay Guddoonka Guddiga Dastuurka uusanba Faroole u muuqan mid maanta dan ka leh, amaba u maqan reer Puntland?
Dowladnimadu ma aha hawl sahlan. Ma aha mid la iska gaaro. Ma aha mid maalinna lagu dhaqmo, maalinna laga sii jeesto. Dowladnimadu waa gacan ku hayn. Dowladnimadu waa tusaale abuurid. Dowladnimadu waa aayaha dadka. Dowladnimada Puntland waa tan dadka ka soo qaxay Xamar iyo Koonfurta Soomaaliya illaa iyo Waqooyiba ay maanta magan u yihiin. Shacabka Puntland mar kale cadow magan uma noqon karaan, cadow-kalkaalna madax kama dhigan karaan. Hadaba Madaxweyne Gaas iyo Baarlamaanka Puntland sharciga garbo ha u noqdeen.
Shacabka Puntland ayana mid baa la gudboon: maanta shalay ma aha, oo shalay ha illaawina; laakiin haddii aydan idinna sharciga garbo u noqon, aayaha carruurtiina aydan iftiin u raadin, shalay ma foga oo hadana berri baa shalay noqon doonta.
Mid kalena waa Madaxweyne Gaas: dayacii Faroole haddii qaarkiis dawo loo helay, dadkii reer Puntland ayana maanta wada yihiin garbo siman, xulufo siyaasadeed oo Faroole iyo xulufadiisa aad la yeelato ogoow waa darxumo horleh.
Radio Daljir PUNTLAND
Hadalkii Faroole hoos ka daalaco
Qormooyinka Daljir 59 Siyaasadda & Dhaqaalaha 484 Wararka 21748
Xildhibaanad Ubax Tahliil oo dhusomareeb si diiran lagu soo dhaweyay
Dayaca iyo darxumada Faroole nala damacsanaa Gaas baa damiyey! | Shacabka News 3 years ago
[…] Dayaca iyo darxumada Faroole nala damacsanaa Gaas baa damiyey! […]
CABDULQAADIR 3 years ago
Asc radio dalkir waad ku majadsantihin xogta muhiimka aad bulshada markasta u soo gudbisaan… Maddexaweyni hii hore ee puntland soo maray runtii waa nin waalan waa nin ceshan wayay wxa uu aminsanyahay waa nin siyasadii somalia ku fshilmayn waa odey wareereay runtii hadalkisa qiima badan yeelan maayo lkn shacab uu afka kudhuftay ayaan karabnaa bal inay garowsadaan hadalku kuhad lay iyo maqaamka uu geeyey haday ku raacan ???? hadii kalena dastuurka puntland waa in lugu qaadaa ..ileen sharciga cidna kama weyna taasna madexweyna gaas baan ugu baaqayaa … waa mahadsantihin
Asc, bahda Daljir iyo akhristayaasheedaba;
Madaxweyne Faroole doorkii odeynimada ahaa wuu ka baydhey, inuu madaxweyne Gaas ku dhaliilo dagaalka Puntland loogaga gardaran yahay waa mid yaabkeeda leh! Mindhaa tegitaankiisii Hargeysa ayaa waxka badeley?
Jawaabta isaguun baa lagu sugayaa?
Abdalla 3 years ago
GOBOLADA SOOL IYO SANAAG IYO BUUHOODLE FAROOLE WAA KU DHAARTAY IN UU SOO CELIYO MARKII LA DOORTAY AJANDAHA OLOLIHIISANA WAA UU KU JIRAY IN UU SOO CELIYO DHULKA MAQAN TAANA WAXAY AHEED MID BEERLAXAWSI AH EE MA AHEEN MID XAQIIQA AH OO SEEDIYAASHIIS AYUU SIIYAY DHULKAA OO UU AGA AAMUSAY,WAXAANA MARAG MADOONTA AHEED MARKII UU KU TILMAAMAY XILDHIBAAN PUNTLANDI AH OO KA WEEDEEYAY GOBOLADA IYO DHULKA MAQAN UU UGU JAWAABAY ARGAGIXISO AYAADTIHIIN EE WALAALAHEEN HA NAGU DIRINA OO CILAAQAADKEENA HA XUMAYNINA ,HADABA SOMAALIDIIDKA XUN EE SOMALILAND YAY WALAAL LAYIHIIN MA PUNTLAND MISE FAROOLE OO KALIYA OO GABAR KA QABA AMA ILMIHIISA ABTIYAALKOOD.
FAROOLI WAXA UU AHAA KHAYRLAAWE XUN OO XAQIIR AH HORAY U AHAA TUUG UU MAXAMED SIYAAD SOO ERYAY.
ABDI WALINA WAA DAANYEER AAN WAX SIDAA AH KA DUWANEEN FAROOLI OO WAXBA YAAN LA BUUN BUUNIN WAA SHAKHSI QABIILI AH OO AAN U QALMIN IN UU HOGAAMIYO PUNTLAND MUDDO KALE WAA WAANU BARANAY WAXA UU YAHAY IYO SIDA UU U SHAQEEYO,GABAGABADINA WAA ISMADHAANTO IYO DHASHEED .UMMADDA PUNTLAND WAA IN AY ISU TASHADAAN OO AY KA FIIRSADAAN CIDA AY MADAX KA DHIGANAYAAN OO AYNAAN CAADIFAD QABIIL ISKA ILAALIYAAN TALA AHAANA WAXAAN U SOO JEEDINLAHAA IN 2019 LOO OGOLAAN GAAS IN UU KU DARSADO MAALIN OO DOWLADNIMADI IYO MAAMULKII DALKA EE LAGA DHIGAY DUKAANKA MACDAARKA AH EE REERKAN ISU WARWAREEJIYO TALAABO CAD OO WAAFAQSAN SHARCIGA LAGA QAADO OO CIDKALE LAGA WARDOONO IYO HALKA AY GAARSIIYAAN IYO WAXA AY QABTAANA LA EEGO OO UU MAAMULKU NOQDAA MID WAREEGTO OO CIDWALIBA AY XAQ U LEEDAHAY IN AY MAAMULAAN DALKA HADII KALE WAA AY KALA TAGAYSAA WAANA AY BURBURAYSAA.WABILAAHI TOWFIIQ.